ခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား)| December 24, 2012 | Hits:12,601
ohnmar December 24, 2012 - 2:31 pm့ မြန်မာပြည်နဲအာရှအမျိုးသမီးတွေစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေများလာတာကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
Reply ဗမာ December 25, 2012 - 10:57 am မှန်ပါတယ်။ အမျိုးသား အားကစားသမားတွေဟာ တိုင်းပြည်ဂုဏ်ဆောင်ချင်တာထက် မိမိနာမည်ကြီးလိုမှု၊စန်းပွင့်လိုမှု၊စူပါစတားဖြစ်လိုမှုတွေကိုပိုပြီးအလေးပေးနေသလားလို့ထင်မှတ်မိပါတယ်။ ပညာလေးနည်းနည်းတတ်တယ်ထင်ရင် လိုတာထက်ပိုပြီး ကြွားကြွားဝါ၀ါနေခြင်း၊ မိမိကိုယ်မိမိလွှတ်အထင်ကြီးခြင်းဟာ ကျဆုံးခန်းနဲ့နီးကပ်လာခြင်းပါပဲ။ ရိုးရိုးကုပ်ကုပ်နဲ့ တိုင်းပြည်ဂုဏ်ကိုဆောင်မဲ့ အမျိုးသားအားကစားသမားတွေများများပေါ်ပေါက်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ထူးချွန်လာသူဟာ ကြော်ငြာနေစရာမလိုလောက်အောင် တိုင်းသိပြည်သိ၊တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် ဖြစ်လာမှာမို့ ထူးချွန်ဖို့ကိုသာအာရုံစိုက်ကြစေချင်ပါတယ်။ မြန်မာ့အားကစား အာဆီယံမှာလွှမ်းနိုင်ပါစေ။
Reply yemyn December 24, 2012 - 3:47 pm I appreciate all soccer team member of Myanmar. You already show the ability of Myanmar ladies.Show again and try again in Asia level and next time to the world level by gradually way.
Reply myo December 24, 2012 - 9:51 pm how about San San Aye,she is very famous in sea game in 1983 around that.
Reply ကျော် December 24, 2012 - 10:07 pm သန်းသန်း က ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းသူပါပဲဗျာ ။ ဂရေစီကား နဲ့ ခင်ခင်ထွေး တို့ ဗန်းမော်က ။ ကို တင်မောင်နီကို တင်အောင်နိလို့ ရေးထားတဲ့ ယခင်ဆောင်းပါးက တိုက်ပင် အမှားကိုလဲ ပြင်ပေးပါ ။